दारी प्रतियोगितामा प्रथम हुने राई लाई दारिले कति फा’इदा ग’रायो भिडियो सहित:: Mero Desh
दारी प्रतियोगितामा प्रथम हुने राई लाई दारिले कति फा’इदा ग’रायो भिडियो सहित
Published on: १५ श्रावण २०७८, शुक्रबार ११:५५
पुर्बी संखुवासभा जिल्ला खाँदबारीमा भेटिए अनौठो मान्छे हेर्दा अर्धबैसे रमाइलो स्वभाव को नाम दिगम्बर राई अर्थात बोकेदारी’ दारि पालेरै जिल्लाभरी चर्चा बटुलेका राई लाई दारी प्रती निकै मोह रहेको बताए। उनले दारी र श्रीमती दुबैको माया बराबर लाग्ने बताए। उनको दारी डेढ फुट लामो रहेको बताउछन।
संखुवासभा जिल्ला दारी प्रतियोगिता आयोजनामा प्रथम भएका राइले दारी एउटा ब्रान्ड भन्ने पेसाले उनलाइ निकै अगाडि सम्म पुर्याएको बताए । संखुवासभा खाँदबारी बाट प्रसारण हुने खाँदबारी एफएम मा समेत उनको बिज्ञापन प्रसारण गरिएको थियो। पूरा भिडियो तल हेर्नुहोस्!
यो पनि,,नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन विद्युत महसुल तिर्न आनाकानी गरेपछि बुधबार फेरि उद्योगी व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरेको छ । तर, प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायी आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् । उद्योगी अतिरिक्त विद्युत उपभोग नगरेकाले शुल्क तिर्न नसक्ने अडानमा देखिए भने प्राधिकरण केही सहजता दिएर भएपनि उठाउने पक्षमा देखियो ।
प्राधिकरणले बोलाएको छलफलमा उद्योगी साहिल अग्रवाल , विष्णु न्यौपाने , पशुपति मुरारका लगायतका उद्योगी प्राधिकरण प्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्यले बोलाएको छलफलमा सहभागी भए । प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न नआए नियमअनुसार अगाडि बढ्ने गरी पत्र पनि सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीलाई पठाइसकेको छ ।
साउनदेखि बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्ने भनिए पनि ठुला उद्योग भएकाले फेरि एकपटक छलफल गरेर अघि बढ्ने सोचले बोलाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यदि चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्ने आयोगमा जान पनि प्राधिक रणले उद्योगीहरुलाई भनेको छ । करिब ६ वर्ष पुरानो विवाद विवादमै अडिकएको छ ।
उता उद्योगी व्यवसायी सरकारले उद्योगीले प्रयोग नै नगरे को महसुल उठाएर उद्योग धरासायी बनाउन खोजेको बताउँदै आएका छन् । शाक्य कै बैठकमा सहभागी भएर आएका एक उद्योगीले आफुहरु लोडसेडिङकै तालिकामा बसेर उद्योग चलाएको कुनै विद्युत उपभोग नगरेकोले तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको रातोपाटीलाई बताए ।
प्राधिकरण बोर्डले अनुमति नदिइ र उद्योगीले निवेदन नदिइ ट्रकलाइनको सुविधा लिनै पाइँदैन र अतिरिक्त सुविधा लिएर विद्युत दिन आफुहरुले कुनै निवेदन नदिएको उनले स्पष्ट पारे । ती उद्योगी भन्छन्, ‘राज्यले उठाउन चाह्यो भने उठाएरै छाड्छ तर कानुनी राज्यको पनि कुरा हुन्छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन मार्फत उपभोग गरेको विद्युतको साढे १५ अर्ब बढी बक्यौता महसुल उठाउन बाँकी छ ।
क’स्को प्रेम’मा छिन् रियाशा दाहाल ? खुलाइन् सबै कुरा ( भिडियो हेर्नुहोस)